जन्मने बित्तिकै आमा-बाले फाल्दिए ! हे भगवान..चाँडै मरेर अर्को जुनीमा सध्दे भएर जन्मिन पाऊँ(भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > जन्मने बित्तिकै आमा-बाले फाल्दिए ! हे भगवान..चाँडै मरेर अर्को जुनीमा सध्दे भएर जन्मिन पाऊँ(भिडियो सहित)
जन्मने बित्तिकै आमा-बाले फाल्दिए ! हे भगवान..चाँडै मरेर अर्को जुनीमा सध्दे भएर जन्मिन पाऊँ(भिडियो सहित)
admin January 21, 2019 January 21, 2019 भिडियो	0
काठमाडौं- (शिशिर भण्डारी) माग्न त दुवैले माग्ने नै हो, फरक यति मात्र हो कि, गरिबले मन्दिर बाहिर बसेर माग्छन्, अनि धनीले मन्दिर भित्र पसेर माग्छन् । तर बाग्लुंगका दिर्घ परियार सधैं भगवानसंग एउटै कुरा माग्छन् । भगवान यो जुनीमा त मलाई यस्तो बनायौं, अर्को जुनीमा चैं अरु जस्तै हिड्न, डुल्न सक्ने बनाईदेऊ है.. बुवा आमाले जन्म त दिए तर बोझ मानेर सानैमा फालिदिए । मामाले नै दिर्घलाई हुर्काए ।
नमस्कार म शिशिर भण्डारी, पोखराको ताल बाराही दर्शनको लागि पुग्दा, ताल छेऊमा ३४ बर्षका दिर्घ परियारलाइ अनौठो र माया लाग्दो शारीरिक बनावट सहित ५ १० रुपैंया माग्न बसेको देखें । धेरै मन छोयो अनि रोयो । मन्दिर छिर्नुअघि दिर्घलाई आफुले सक्दो सहयोग गर्न मन लाग्यो ।
यसअघि पनि केहि युटुबहरुले दिर्घको भिडियो खिचे तर सहयोग आएन । केहि व्यवस्था भैदिए मागी खान पर्थेन । यो जुनीमा दिर्घको त्यत्ति चाहना छ ।कठैबरा दिर्घ सधैं भन्छन्, मलाई शरीरको मायै छैन । आमा बाले त हेरेनन् । चांडै मरेर स्वर्ग जान पाए, अर्को जुनीमा तपाईहरु जस्तै सग्लो मान्छे भएर जन्मिन पाउंथे कि ?कति कठिन जीवन दिर्घको । दिर्घको ठाउंमा आफुलाई राखेर हेर्नुस त, कल्पना गर्दा पनि उकुसमुकस भईन्छ । दिर्घ आफैलाई आफ्नो जीवन बोझ लाग्छ ।
दिर्घका लागि मैले गर्न सक्ने काम यत्ति थियो । उनको भिडियो खिचेर दुख र बेदना सबैलाई सुनाउने अनि दृखाउने । जाडोमा कठ्यांग्रिदै आफ्नो शरीरको अवस्था देखाउन दिर्घको बाध्यता हो । शरीर यस्तो छ भनेर देखाएन भने कसैले सहयोग नै गर्दैनन्, दिर्घले यसै भने । दिर्घलाई कठ्यांग्रिदै बसेको मैले देख्न सकिन । एउटा ओढ्ने किनेर ओढाईदिए, अनि हजार रुपैंया सहयोग दिएं ।
दर्शकबृन्दहरु, धेरै दुखी पिडित छन््, तपाई हामीकै वरीपरी । बिस्तारै बिस्तारै सबैका लागि गर्नुछ । यो भिडियो पुरा हेरेर हेर्ने जति सबेले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्दिनु होला हैं । भिडियो मन पर्यो भने लाईक गर्दिनुहोला । दिर्घका लागि म छिट्टै यो भिडियोबाट आएको पुरै रकम र तपाईहरुबाट आएको सहयोग लिएर पोखरा जानेछु । सहयोग गर्नका लागि मलाई ९८११००६९२९ मा सम्पर्क गर्नुहोला है..आर्थिक सहयोग गर्न नसकेपनि भिडियो पुरा हेरर र सेयर गरेर दिर्घका लागि सहयोगी हात बन्दिनुहोला । आउनुहोस, पुरै भिडियो हेरौं ।
टिचिङ जान्छु भनेका डा. केसीलाई ट्र’मा सेन्टरमा लैजान यस्तो ज’बरज’स्ती गरेपछि… (भिडियो हेर्नुस्)